Kana iwe uchida kushandira Apple, tarisa yavo itsva webhusaiti | Ndinobva mac
Kana iwe uchida kushandira Apple, tarisa yavo itsva webhusaiti
Kune isu tese tinofarira Apple uye tine zvishandiso zveiyo brand, isu hatina ivo chete nekuda kwehunhu hwavo uye aesthetics. Icho chimwewo chinhu, Apple haisi kungova neyako iPhone kana Mac, zvinoita senge mararamiro. Ndokusaka vangangoita isu tese takamboshamisika kuti zvingave zvakaita sei kushanda mukambani asi zvinoita sechinhu chiri kure kwazvo uye chisingawanikwe zvakanyanya. Izvo hazvizombove zvakadaro zvakare nekutenda kune iyo nyowani webhusaiti iyo kambani yakatangisa uye kwatinogona kuona iyo basa rinopihwa
1 Kushanda kuApple kunoitwa nehunyanzvi uye tinoyeuchidzwa izvi pane ino webhusaiti
2 Pane peji idzva pane zvakare chikamu chakanzi "Upenyu kuApple"
Kushanda kuApple kunoitwa nehunyanzvi uye tinoyeuchidzwa izvi pane ino webhusaiti
Basa paApple ndiro zita re webhusaiti nyowani yekambani kwatinoona basa rinopihwa nekambani uye nekudaro kukwanisa kuzadzikisa chishuwo chedu chekushandira femu inoita michina yatinoshandisa. Zvingave zvakanaka kuvashandira, kana chete nekuda kwevashandi vanobvisa zvavanazvo pamidziyo iri pabhokisi. 😉
Iyo webhusaiti yakagadzirwazve inotsiva yekare webhusaiti "Mabasa kuApple" anga atovepo. Iyo webhusaiti nyowani yakanyatsogadziriswa uye inovhura iine tsananguro yezvaunotarisira kana ukashandira kubva kukambani
Apple ndipo paunoshanda nevamwe vanhu vanogovana zvaunofarira. Iko bhizinesi kunoshandira ruzivo. Iko kuremekedza kwakanaka kweushingi uye kufunga kwepakutanga kunokurudzira iwe kuti uunze zvaunogona pane zvatinoita pamwe chete.
Izvo zvinotaurwa kuti Apple yakarongedzwa nehunyanzvi hunoshanda panzvimbo pezvikamu zvebhizinesi. Hardware nyanzvi dzinotarisa pane Hardware, software nyanzvi dzinotarisa pane software, uye dhizaini dhizaini inotarisa pane dhizaini. Izvi zvinopesana nemamwe makambani makuru. Nyanzvi dzinosarudza pane izvo zvavanoziva uye hazvitungamirirwe nevasiri-nyanzvi pachinhu ichi.
Apple vatungamiriri sanganisa ruzivo rwavo iine mamwe maviri akakosha maitiro: kunyudzwa mune zvakadzama uye kuda kukakavadzana pamwe chete panguva yekutora sarudzo pamwe.
Pane peji idzva pane zvakare chikamu chakanzi "Upenyu kuApple"
Kune zvakare kune yakasarudzika "Hupenyu kuApple" chikamu chinoongorora huri sei hupenyu hwezuva nezuva mukambani kana vakangokuhaya iwe, kusanganisira iwo maitiro, mabhenefiti ...
Pane zvakawanda kwauri kupfuura chero munhu anoziva. Tora chiitiko chako chawakagara kuApple uye uone kuti pane zvakawanda sei zvekuita, kugovana nekuwana. Nekuti pano, tinokugamuchira iwe zvauri uye zvaunoda kuva.
Kune maburi emunhu wese mukambani. Meseji yakanaka isingasiyi isina basa. Tese isu tinogona kusvika kuzoshanda kuApple. Ndiwo manzwiro avanoda kuratidza. Kusiyana kwakasanganisirwa uye kuiswa kunogamuchirwa. “Patinounza munhu wese mukati, tinogona kuita basa rakanakisa rehupenyu hwedu pamwe chete. Ndosaka tichiramba tichisimbisa kuzvipira kwedu mukupa basa renguva refu pamwe nekuedza senge kubatanidza kutsvaga uye kusimudzira uye mubhadharo wakanaka kune vese.
Kunyanya kukoshesa kunoiswa nyaya dzevamwe vanhu vakatengwa nekambani. Echokwadi mushandi zvipupuriro Ivo vanonzwa kunge Apple inovabata nenzira ine chiremerera uye yakavapa nzira yekubuda nayo apo mamwe makambani akavhara madhoo avo evashandi. Paunenge uchiverenga nyaya kana pfupiso dzekuti nei vasarudza kambani iyi kushandira, unoona kuti urikurumbidza hunhu hune kambani. Kuisirwa, kuvanzika, kugadzirisazve, nharaunda, hutungamiriri uye zvimwe zvishoma.
Nhanho inotevera yekutsvaga basa kubaya iyo «Mbiri» Tab (profile) uye ipapo uchafanirwa kuisa yako Apple ID. Paunenge uchizadza rudzi rwehurongwa unenge uchiwana mamwe ma profiles ebasa kana vamwe. Zvese zvakapusa uye izvo zvinokutendera iwe kuyedza mhanza yako mumatanho mashoma uye pamwe mumwedzi yakati wandei iwe uchazviona iwe pachako uchishandira iyo kambani inogadzira izvo zvishandiso zvaunoshandisa mazuva ese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Kana iwe uchida kushandira Apple, tarisa yavo itsva webhusaiti
Ini ndinotumira AirTags, macOS Big Sur 11.3 zviri pamutemo, uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac